ကမ္ဘာ့ဖလား မှတ်တမ်းကောင်းတစ်ခုရခဲ့တဲ့ ပြင်သစ်အသင်းနည်းပြဒက်စ်ချမ့်
မှတ်တမ်းကောင်းတစ်ခုရခဲ့တဲ့ ပြင်သစ်အသင်းနည်းပြဒက်စ်ချမ့် Deschamps
11 Jul 2018 . 6:15 PM
ပြင်သစ်အသင်းနည်းပြဒက်စ်ချမ့် Deschamps ဟာ နိုင်ငံလက်ရွေးစင်အသင်းကို ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားဗိုလ်လုပွဲရောက်အောင် ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် မှတ်တမ်းကောင်းတစ်ခုရရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ကမ္ဘာ့ဖလားဗိုလ်လုပွဲကို ကစားသမားအဖြစ်သာမက နည်းပြအဖြစ်ပါ ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ စတုတ္ထမြောက်အဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒက်စ်ချမ့်ဟာ ပြင်သစ်အသင်း ပထမဆုံးအကြိမ်ဗိုလ်စွဲခဲ့တဲ့ ၁၉၉၈ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲမှာ အသင်းခေါင်းဆောင်အဖြစ် ကစားခွင့်ရခဲ့ပြီး အခု ပြင်သစ်အသင်းကို ကမ္ဘာ့ဖလားဗိုလ်လုပွဲ ပြန်လည်ရောက်ရှိအောင် ဦးဆောင်နိုင်ခဲ့သူပါ။
ဒက်စ်ချမ့်မတိုင်ခင် ကမ္ဘာ့ဖလားဗိုလ်လုပွဲကို ကစားသမား/နည်းပြအဖြစ် ဆင်နွှဲခဲ့သူတွေကတော့ ဂျာမန် ဂန္ထ၀င်တွေဖြစ်တဲ့ ဘက်ကင်ဘောင်ဝါ Beckenbauer ၊ ရူဒီဗောင်လာ Rudi Voller ၊ ဘရာဇီးလ်ဂန္ထ၀င် ဇာဂါလို Zagallo တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘက်ကင်ဘောင်ဝါဟာ ကစားသမားဘ၀မှာ ၁၉၇၄ ကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံဆု ရရှိခဲ့ပြီး နည်းပြအဖြစ် ၁၉၉၀ ကမ္ဘာ့ဖလားမှာ ဂျာမနီအသင်းကို ဗိုလ်လုပွဲရောက်အောင် ပို့ဆောင်ခဲ့သလို ချန်ပီယံဆုလည်းဆွတ်ခူးခဲ့တယ်။ ရူဒီဗောင်လာက ကစားသမားဘ၀မှာ ဂျာမနီအသင်းနဲ့အတူ ၁၉၈၆၊ ၁၉၉၀ ကမ္ဘာ့ဖလားဗိုလ်လုပွဲတက်ရောက်ခဲ့ပြီး ၁၉၉၀ မှာ ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ နည်းပြအဖြစ်နဲ့ ၂၀၀၂ ကမ္ဘာ့ဖလားမှာ ဂျာမနီအသင်းကို ဗိုလ်လုပွဲရောက်အောင် စွမ်းဆောင်ခဲ့ပေမယ့် ဘရာဇီးလ်အသင်းကို (၂-၀)ဂိုးနဲ့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့တယ်။ ဘရာဇီးလ်ဂန္ထ၀င် ဇာဂါလိုကတော့ ကမ္ဘာ့ဖလားကို ကစားသမားအဖြစ်သာမက နည်းပြအဖြစ်ပါ ပထမဆုံးရယူနိုင်ခဲ့သူအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ထားသူပါ။ ဇာဂါလိုဟာ ကစားသမားဘ၀မှာ ဘရာဇီးလ်အသင်းနဲ့အတူ ၁၉၅၈၊ ၁၉၆၂ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲတွေမှာ ဗိုလ်စွဲခဲ့ပြီး ၁၉၇၀ ကမ္ဘာ့ဖလားမှာ နည်းပြအဖြစ် ချန်ပီယံဆုကို ကိုင်မြှောက်နိုင်ခဲ့တယ်။ တကယ်လို့ ဒက်စ်ချမ့်အနေနဲ့ ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားကို ကိုင်မြှောက်နိုင်ခဲ့ရင် ဇာဂါလို၊ ဘက်ကင်ဘောင်ဝါတို့နဲ့အတူ ကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံဆုကို ကစားသမား/နည်းပြအဖြစ် ရယူခဲ့တဲ့ တတိယမြောက်အဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
မှတျတမျးကောငျးတဈခုရခဲ့တဲ့ ပွငျသဈအသငျးနညျးပွဒကျဈခမျြ့ Deschamps
ပွငျသဈအသငျးနညျးပွဒကျဈခမျြ့ Deschamps ဟာ နိုငျငံလကျရှေးစငျအသငျးကို ၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားဗိုလျလုပှဲရောကျအောငျ ပို့ဆောငျပေးနိုငျခဲ့တဲ့အတှကျ မှတျတမျးကောငျးတဈခုရရှိခဲ့ပါတယျ။ အဲဒါကတော့ ကမ်ဘာ့ဖလားဗိုလျလုပှဲကို ကစားသမားအဖွဈသာမက နညျးပွအဖွဈပါ ယှဉျပွိုငျခှငျ့ရခဲ့တဲ့ စတုတ်ထမွောကျအဖွဈ မှတျတမျးဝငျခဲ့ပွီဖွဈပါတယျ။ ဒကျဈခမျြ့ဟာ ပွငျသဈအသငျး ပထမဆုံးအကွိမျဗိုလျစှဲခဲ့တဲ့ ၁၉၉၈ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲမှာ အသငျးခေါငျးဆောငျအဖွဈ ကစားခှငျ့ရခဲ့ပွီး အခု ပွငျသဈအသငျးကို ကမ်ဘာ့ဖလားဗိုလျလုပှဲ ပွနျလညျရောကျရှိအောငျ ဦးဆောငျနိုငျခဲ့သူပါ။
ဒကျဈခမျြ့မတိုငျခငျ ကမ်ဘာ့ဖလားဗိုလျလုပှဲကို ကစားသမား/နညျးပွအဖွဈ ဆငျနှဲခဲ့သူတှကေတော့ ဂြာမနျ ဂန်ထဝငျတှဖွေဈတဲ့ ဘကျကငျဘောငျဝါ Beckenbauer ၊ ရူဒီဗောငျလာ Rudi Voller ၊ ဘရာဇီးလျဂန်ထဝငျ ဇာဂါလို Zagallo တို့ပဲဖွဈပါတယျ။ ဘကျကငျဘောငျဝါဟာ ကစားသမားဘဝမှာ ၁၉၇၄ ကမ်ဘာ့ဖလားခနျြပီယံဆု ရရှိခဲ့ပွီး နညျးပွအဖွဈ ၁၉၉၀ ကမ်ဘာ့ဖလားမှာ ဂြာမနီအသငျးကို ဗိုလျလုပှဲရောကျအောငျ ပို့ဆောငျခဲ့သလို ခနျြပီယံဆုလညျးဆှတျခူးခဲ့တယျ။ ရူဒီဗောငျလာက ကစားသမားဘဝမှာ ဂြာမနီအသငျးနဲ့အတူ ၁၉၈၆၊ ၁၉၉၀ ကမ်ဘာ့ဖလားဗိုလျလုပှဲတကျရောကျခဲ့ပွီး ၁၉၉၀ မှာ ခနျြပီယံဖွဈခဲ့ပါတယျ။ နညျးပွအဖွဈနဲ့ ၂၀၀၂ ကမ်ဘာ့ဖလားမှာ ဂြာမနီအသငျးကို ဗိုလျလုပှဲရောကျအောငျ စှမျးဆောငျခဲ့ပမေယျ့ ဘရာဇီးလျအသငျးကို (၂-ဝ)ဂိုးနဲ့ ရှုံးနိမျ့ခဲ့တယျ။ ဘရာဇီးလျဂန်ထဝငျ ဇာဂါလိုကတော့ ကမ်ဘာ့ဖလားကို ကစားသမားအဖွဈသာမက နညျးပွအဖွဈပါ ပထမဆုံးရယူနိုငျခဲ့သူအဖွဈ မှတျတမျးဝငျထားသူပါ။ ဇာဂါလိုဟာ ကစားသမားဘဝမှာ ဘရာဇီးလျအသငျးနဲ့အတူ ၁၉၅၈၊ ၁၉၆၂ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲတှမှော ဗိုလျစှဲခဲ့ပွီး ၁၉၇၀ ကမ်ဘာ့ဖလားမှာ နညျးပွအဖွဈ ခနျြပီယံဆုကို ကိုငျမွှောကျနိုငျခဲ့တယျ။ တကယျလို့ ဒကျဈခမျြ့အနနေဲ့ ၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားကို ကိုငျမွှောကျနိုငျခဲ့ရငျ ဇာဂါလို၊ ဘကျကငျဘောငျဝါတို့နဲ့အတူ ကမ်ဘာ့ဖလားခနျြပီယံဆုကို ကစားသမား/နညျးပွအဖွဈ ရယူခဲ့တဲ့ တတိယမွောကျအဖွဈ မှတျတမျးဝငျနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
by Naing Linn . 47 mins ago